News DeskMay 8, 2021
oo duleedka daaqayey soo dhexmaray – ishana soo mariyey. Wuxu adhiga ku soo arkay, wan weyn oo galaalan. Wankii ayuu wadaadkii soo ishaaqsaday oo is yidhi,” Allaylehe kaasi ayaa kugu habboon ee subaxa la ambabax!“
Haddaba, markii uu wadaadkii soo ambaxay ayaa la guddoonsiiyey, wankii yaraa ee galaalnaa oo geed ku xidhanaa. Wadaadkii oo yaabban oo indhihiisa rumaysan la’, ayaa yidhi hal-ku-dhegga taariikhda galay ee ah, “Bal inta uu le’eg yahay ee uu galaalan yahay eega!”
Filan waa iyo fajiciso dheh!